Kuhle Amathuluzi Snow lokwela ukudayiswa - China Richina
Khombisa No .: H350
Shona Usayizi: 367 * 445mm
Ubude sekukonke: 1300mm
Ukukhiqiza: 3000000pcs ngenyanga
Supply Ikhono: 300000pcs ngenyanga
Lokhu Kuhle Isithwathwa lokwelahaselikhulu , oversized D-Grip izibambo uvumele elilodwa noma amabili ngilambatha inhlabathi ngisho ngenkathi ugqoke gloves.The Kuhle Snow lokwelahas a steel kushaft eqinile yokuhlala bephakamisa nokuthinta inhliziyo imithwalo egcwele. It won`t bend, baphule noma ukwehlisa isithunzi, ukuhlinzeka neminyaka enkingeni ukusebenza khulula. I Kuhle Snow Shvoel nge ozikhethela steel onqenqemeni abe metal bafake strip ukuthi kwandisa ukuphila blade. Izihlalo onqenqemeni ngokuqinile kwishaneli olubunjiwe phezu insingo yokushefa ngokwenkambiso simelane eguqa. I Kuhle Snow lokwela ithuluzi kubalulekile ebusika.
Kuhle amathuluzi Snow lokwela, Isithwathwa Pusher lokwela,
Sekukonke Ubude 1300mm
Dia 30.5mm powder steel camera tube uphathe ngokukhathalela ezithambile plastic emikhonweni
Elikhulu, Ukhululekile D-ukuma ukubamba
Blade futhi basingathe zixhunywe Ilokhi snap
Imibala kungenziwa egcizelele
Ufuna enhle Snow lokwela Lowes Umkhiqizi & umphakeli? Sine a Ukukhetha eziningi ngamanani ezinkulu ukukusiza uthole yendalo. Zonke Snow lokwela Ikhaya Depot kukhona izinga yibhange. Singabantu China Umsuka Factory leqhwa lokwela Izibuyekezo. Uma kukhona umbuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Ergonomic Snow Scoop lokwela
Ergonomic Snow lokwela Pusher D ukuma ukubamba
Telescopic Car Snow lokwela nge Plastic Blade
Aluminium Grain Isithwathwa Scoop lokwela
Eziphuthumayo ephathekayo Metal Car Snow lokwela